Drumlin: gini ka ọ bụ, njirimara na ọzụzụ | Network Meteorology
Taa, anyị ga-ekwu maka otu ụdị ọdịdị ọdịdị ala nke etolitere site na enyemaka ice. Ọ gbasara drumin. Aha a sitere na Irish "droim" ma obu "drim" ma putara "ugwu nke ugwu". Nhazi ya sitere na nkpuchi nke glacial na ọ bụ ihe ọzọ karịa obere mkpumkpu nwere slopes dị larịị nke yiri akwa whale. A na-eme ha site na ịme ngosipụta nke glacier na ntuziaka nke ije ice n'oge oge glaciation.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị njirimara niile, ọzụzụ na ịmata ihe nke drumlin.
2 Nhazi nke drumlin
3 Ngwa Drumlin
4 Msdị nchịkọta
Anyị na-ekwu okwu banyere otu ụdị obere mkputamkpu ala nke mejupụtara na mkpọda mkpọda. Mgbada ndị dị larịị nwere ụdị nke a ebe ọ bụ na ice nke glaciation na oge gbazee na-ebute mbuze site na abrasion. Shapedị nke drumlin bụ nke whale na-agha ụgha ma na-emepụta ya ntụziaka nke ngagharị nke ice na-ebukarị n'oge ice.
Ebe ọ bụ na a na-ahụ drumlin n'akụkụ ebe a na-edebe moraine, a na-ahụta ha dị ka usoro sitere na moraine nke emepụtara na ala nke glacier. Moraines bụ set nke ihe eji eme ka mmiri kpụkọta akpụkọ na-agbakọ n’akụkụ nke ihe ndozi. Ha nwere ike ịpụta na iche ma ọ bụ ihe a na-ahụkarị na otu dị ka pụtara na mpaghara Patagonia nke Chile. Ma ọ bụ na set nke sedimenti nke na-etolite moraines na-aga n'ihu nke ice na ifufe na-agbasi ike. Anyị maara na ice na-enwekwa mmegharị nke ya dabere na mkpọda na oge glaciation.
Nhazi nke drumlin
Ka anyị lee ihe bụ usoro esi eme ya a ji esi rụọ ya. Anyị maara na ha bụ akụkụ nke mbara ala nke ihe ice na-eme. E nwere ọtụtụ arụmụka banyere mmalite nke drumlin, ọ bụ ezie na echiche ndị kachasị emetụta bụ ihe ndị a:
Ọ bụ ngwaahịa sitere na idei mmiri n'okpuru glacier. Alluvium a nwere ike ibuga ọtụtụ ihe n'otu oge wee gbakọba na chanel nke sub-ice. Ọwa ndị a bụ ebe mmiri na-asọ, nke na-agba oyi, mana site na mpaghara ala na-aga n'ihu na steeti mmiri. Anyị maara na akpụrụ ahụ rapaara na sedimenti ma ọ naghị ajụ oyi kpamkpam. Akụkụ nke ala nke ice nke na-agbagharị sedimenti na ala na-abụkarị na mmiri mmiri ma ọ bụ maka mmeghari nke ice.
Ejiri nnukwu ice kpụrụ akpụ nke jiri nwayọ nwayọ kpụọ ụwa. Mgbe anyị na-ezo aka n'ịkọcha ụwa anyị na-ezo aka n'ụdị mbuze akpọrọ abrasion. Abrasion bụ usoro a na-eme site na ịdọrọ nke sedimenti na ibu nke ọ bụla. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, mgbe ice na-arịgo n'elu ala, ọ na-ewepụta abrasion n'ihi nhazi ya na ala na-emebi emebi ma nwee ọdịdị dị mma.
A na-ejikọta usoro ịkpụ igwe na ụdị ihe na-eme ugwu ndị a. Ma ọ bụ na ikike nke sedimenti ahụ yiri ka ọ na-arụ ọrụ dị mkpa na usoro ịkpụzi. Ọ bụrụ na sedimenti nke dị n’okpuru ice a chịkọbara site na oge oge snow ga-ekwe omume, ọ ga-esiri ya ike ịdọrọ ebe ọ bụ na ọ ga-ewepụta.
Ka anyị lee ihe bụ isi ihe eji eji ịkpụ igwe rụọ. Nke mbụ bụ ịmara ihe eji apịtị mmiri. A maara apịtị a na-efe efe site na aha rue. Ọ bụ ngwakọta nke ụrọ, aja na gravel nke nwere akụkụ angular na mgbe ụfọdụ nwere mgbochi nkume. Glacier ahụ na-adọkpụ ma na-agbanye ihe ndị a ma debe ha na ala. N'ụzọ dị otú a, ọ bụ ihe dịnụ iji gafere site na glacier dị ala alluvium.
Mgbe ụfọdụ, sedimenti nwere ike mepụta drumlin nke mbugharị nke mmiri site na mmiri na-asọba n'okpuru ice. Dịka anyị kwurula na mbụ, n'okpuru akwa ice bụ akwa mmiri na mmiri mmiri dị ka osimiri. N’oge ole na ole, akpụrụ akpụrụ akpụ n’ozuzu ya. Karịsịa n'oge agbaze, akụkụ nke na-aghọ mmiri kachasị ọsọ bụ akụkụ dị n'ime ice. Na nke a, mgbe a na-akpụ drumlin site na Osimiri a na-agagharị n’okpuru ice bụ okwute okwute.
Kemgbe oge ice ikpeazụ, nke mere ihe dịka afọ 18.000 gara aga, ice ahụ atalatala, na-ekpughe ihe enyemaka ndị e ketara eketa ruo n'ókè ọ bụla ọ dịrị n'oge afọ ice ikpeazụ. Nke ahụ bụ ịsị, site na oge igbaze na nbelata elu nke kpuchiri ya, ọ na-ekpughere enyemaka na ịme ngosi glacial.
Ebe a na-ajụ oyi nke a maara dị ka mgbe mmiri bụ mmiri kpụkọrọ akpụkọ nwere ihe ndị glaciers tinye ozugbo. Ihe ndị a enweghị stratification na iberibe ha na-egosi ọgụ n'ihi ngbanwe na esemokwu na ala. Moraine bụ usoro mejupụtara site na mkpụrụ osisi na-agbakọ n'akụkụ n'akụkụ glaciers. Ọ bụrụ na glacier ada a na-edebe oyi akwa nke ụdị wavy a na-akpọ basal moraine. Ozugbo ọ gara n'ihu ịlaghachi azụ, ihu nwere ike ịkwado ma mepụta moraine retreat.
Moraines ndị na-adịkarịkarị na-ahụkarị nke glaciers ndagwurugwu. Ha na-ahụ maka ịkwaga mmiri niile n'akụkụ akụkụ ya ma debe ya na ọdụm dị ogologo. Mgbe moraine dị n'akụkụ ya na njikọta nke ndagwurugwu abụọ, a na-emepụta moraine nke dị n'etiti.
N'ikpeazụ, ozugbo a na-etinye nsị ndị ahụ n'èzí n'ígwé mmiri kpụkọrọ n'ikuku na ifufe na ihe ndị ọzọ na-arụ ọrụ na mbara ala, a na-akpụ ịgbà. E nwere usoro geomorphological ndị ọzọ nke sitere na enyemaka glacial na nke mejupụtara irighiri ahihia ma kame, kamera mpụga, na ndị eska ahụ.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere drumlin na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Drumlin